Xiaomi Mi Band ayaa horay ula jaanqaaday Google Fit | Androidsis
Xiaomi Mi Band ayaa hadda la jaan qaada Google Fit
Manuel Ramirez | | Codsiyada Android, Xiaomi
Xiaomi Mi Band waa mid ka mid ah jijimooyinka caqliga badan ee saameynta ugu badan yeeshay sanadkan tan iyo markii la sii daayay xagaagii hore. Qiimo aan badanaa ka badnayn € 20 oo xitaa lagu iibsan karo qiyaastii € 15 haddii aad taqaanid sida loo baadho, Xiaomi Mi Band waxay ku guuleysatay inay hesho fure sax ah oo ka mid noqda aaladaha horseedka u ah inay duubaan dhammaan dhaqdhaqaaqa jirka in isticmaaluhu sameeyo maalinta oo dhan, ugu yaraan waxa socda iyo socodka.
Caddaalad Xiaomi waxay cusbooneysiisay barnaamijka Mi Fit ee nooc cusub oo keena sheeko cusub waana u waafajinta Google Fit gudbinta dhammaan xogta ay Mi Band ururiso inta lagu jiro maalinta. Sidan oo kale, marka laga reebo barnaamijka rasmiga ah, waxaan heli doonnaa barnaamijka Google ee ugu wanaagsan si aan ula socono dhammaan jimicsiga maalinlaha ah ee aan sameyno. Dhammaan warka wanaagsan ee loogu talagalay isticmaaleyaasha leh mid ka mid ah xargaha cajiibka ah ee Xiaomi. (Ma ogtahay sida xiriiri ama ka xir Mi Band 2?)
1 Isku xir dhammaan xogtaada Google Fit
2 Muxuu ku fiicanyahay Xiaomi Mi Band?
Isku xir dhammaan xogtaada Google Fit
Mi Band waa la seegi karaa in aysan u dhigmin barnaamijyada kale ee jimicsiga jirka sida Endomondo ama Google Fit lafteeda. Qeybta dambe waa mid ka mid ah waxyaabihii ugu fiicnaa ee aan soo marnay bilihii la soo dhaafay si aan u aragno jalleec deg deg ah sida aan ku sameyno jimicsi maalinle ah. Ugu dambeyntii, waxaan bilaabi karnaa dhammaan xogta ay Mi Band u ururiso Google Fit cusboonaysiinta cusub.
Si loola wadaago dhammaan xogtaas Google Fit, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa inaad ku xirto barnaamijka Mi Fit barnaamijka koontadaada Google. Sidan ayaad ku bilaabi doontaa inaad isku dubbarido dhammaan xogta waxaadna Google Fit ka dhigi doontaa mid sax ah markii la soo tebinayo, leh sawirada cusub ee yimid ee cusbooneysiinta cusub ee ku soo degtay goor dhow Play Store.
Cusboonaysiintaan cusub kudar tirooyin badan oo tayo leh Xiaomi Mi Band, Maaddaama in ka yar you 20 waxaad lahaan kartaa jijin caqli weyn oo aad ku waafajin karto tallaabooyinka iyo kalooriyada ku baxday Google Fit.
Muxuu ku fiicanyahay Xiaomi Mi Band?
Waxa ugu horeeya waa qiimaha, iyo in aan dhowr jeer sheegay. In ka yar € 20 jijin u oggolaanaysa isticmaaleha, marka laga reebo waxa diiwaanka u ah dhaqdhaqaaqooda maalinlaha ah iyo xitaa saacadaha hurdada, wac iyo ogeysiis qoraal ah iyada oo loo marayo saddexda nalalka LED-ka ee Xiaomi la gashan karo dushiisa.
Faa'iidooyinka kale ee ugu weyn ayaa ah nolosha batteriga dheer. 30 waa maalmaha aad iloobi doonto inaad soo rogto jijin. Adigoon ilaawin inay tahay IP67 shahaado, sidaa darteed wuu kula socon karaa ku dhowaad meel kasta adigoon ka walwalin inaad qoyso ama wax dhacaya.
Mi Band wuxuu ku xiran yahay Bluetooth si uu u dhaafi dhammaan xogta la soo ururiyay ilaa markii ugu dambeysay ee la waafajiyay si looga arko barnaamijka Mi Fit. Marka waxaa loo isticmaali karaa iyadoo lagu lammaaneynayo taleefanka si loo helo xitaa iyadoo gariir la imaanayo ogeysiisyada, ama xitaa dhamaadka maalinta ku xir Bluetooth iyadoo la adeegsanayo taleefanka si loo waafajiyo xogta maalinta, haddii aadan rabin si aad ugu isticmaasho Bluetooth xad-dhaaf ah.
Waxaan idhi, jijin weyn oo caqli badan leh qiimo gaar ah oo lacag ah, iyo in, iyada oo cusbooneysiin ah in aad la jaanqaadi karto Google Fit, waa mid ka mid ah iibsiyada ugu fiican ee aad hadda sameyn karto qalab ahaan.
Kahor intaadan dhammeynin, taas ayaa ku xusuusinaysa Waxaad kala soo bixi kartaa nooca Isbaanishka ee laga bilaabay HTCmania isticmaale isagu amaahiyay si uu u sameeyo tarjumaadda. Xiriirintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Mi Band ayaa hadda la jaan qaada Google Fit
[APK] Wear Mini Launcher waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 4.0 iyadoo leh horumarinno muhiim ah
OnePlus Two ayaa la soo bandhigi karaa bisha Juun 1